पलको “आमा”ले रुदै रोजिन बुहारी !, “तेरिया” भन्छिन फिल्म खेल्ने योजना छैन ! (भिडियो सहित)
पलको फिल्म हेर्न “तेरिया” नेपालमा, भन्छिन, रुन मन लाग्यो
करीब ३ वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आएको फिल्म हो- ‘बीर विक्रम’ । यसका निर्माता तथा निर्देशक हुन्- मिलन चाम्स । यो फिल्मले बक्सअफिसमा औसत व्यापार गरेको थियो । यही फिल्मको नामको पछाडि २ झुण्ड्याएर निर्देशक चाम्सले ‘बीर विक्रम २’ बनाएका छन्, जुन यही शुक्रवारबाट देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ । तर, यो फिल्म सिक्वेल नभएर सिरिज रहेको चाम्स बताउँछन् ।
खासमा उनी सिक्वेलकै तयारीमा थिए । कथा पनि तयार थियो । पहिलो पार्टमा अभिनय गरेका अभिनेता द्वय दयाहाङ राई र अनुप विक्रम शाहीसँग मौखिक सहमती पनि भएको थियो । छायाँकारदेखि प्राविधिकसम्म सबै कन्फर्म गरिसकेका थिए, चाम्सले । तर, अन्तिम समयमा दया र अनुपले फिल्म केही समय पछाडि सार्न आग्रह गरे, जुन मान्न चाम्स तयार भएनन् । पल शाह को आमाले रुदै रोजिन् बुहारी ! रोईन तेरिया मगर ….भिडियो सहित
तेरिया भन्छिन्–‘अहिले नै फिल्म खेल्ने योजना छैन’
‘डीआइडी लिटिल मास्टर्स सिजन ३’की विजेता तेरिया मगर अहिले के गर्दैछिन् भन्ने कौतुहलता उनका फ्यानलाई होला । तेरिया नेपालमा भन्दा भारतमा नै बढी बस्ने भएकाले पनि उनको बारेमा खबर कम आउँछन् । तेरिया, बुधबार भने काठमाण्डौको कुमारी हलमा चलचित्र ‘वीर विक्रम २’को प्रिमियरमा पुगिन् ।
तेरियाले अहिले आफूले त्यस्तो केही काम नगरेको भन्दै सिकिरहेको नै सुनाइन् । कुन नायकसँग पर्दामा काम गर्न मन छ भन्ने प्रश्नमा तेरियाले भनिन्–‘त्यस्तो एक जना भन्ने त कोही पनि हुनुहुन्न । मलाई सबैसँग काम गर्न मन छ । सबै जना राम्रो हुनुहुन्छ ।’ भिडियो हेर्नुहोस ।